Taliye cusub oo loo magacaabay Nabad sugidda gobolka Banaadir |
Taliye cusub oo loo magacaabay Nabad sugidda gobolka Banaadir
Taliska nabad sugidda gobolka Banaadir ayaa waxaa loo magacaabay Taliye Cusub,waxaana xilkaasi loo magacaabay Col. Maxamed Aadan Jimcaale oo loo Yaqaano “Koofi” taliyahan cusub ayaa bedeley Khaliif Axmed Ereg oo hore u hayey xilka taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaan wali si rasmi ah u shaacin balse ilo wareedyo lagu Kalsoon yahay oo ku sugan Xarunta Madaxtooyada Qaranka Soomaaliyeed ee Villa-Soomaaliya ayaa Raxanreeb.com u xaqiijiyey in xilka taliyaha nabad sugidda loo magacaabay Col. Maxamed Aadan Koofi.
Taliyahan cusub ayey inoo sheegeen dadka ay isku dhow yihiin inuu Waxbarashadiisa ciidan kusoo qaatay Kulliyado ciidan oo ku yaalla wadamada Suudaan iyo Jabuuti,wuxuuna ka mid yahay Saraakiisha da’da yar ee ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya.
Col. Koofi ayaa muddooyinkii u danbeeyey ahaa Shaqaalaha amniga madaxtooyada Soomaaliya,waxaana la tilmaamay inuu ahaa abaanduulka taliska 60aad ee amniga madaxtooyada,wuxuuna ka mid ahaa dadka sida gaarka ah u qaabilsanaa amniga madaxda dalka.
Taliyahan cusub ee nabad sugidda gobolka Banaadir loo magacaabay ayaa waxbarashada Master-ka kusoo qaatay Jaamacadda Kampala University ee dalka Uganda,wuxuuna ku takhasusay Maamulka iyo Maaraynta ,dowladda Soomaaliya wali si rasmi ah ugu dhawaaqin magacaabista taliyaha cusub ee gobolka Banaadir balse waxaa lagu wadaa iney saacadaha soo socda shaaca ka qaado.
Dhwaan ka filo shabakada somalinimo1.com magacaabista taliyahan cusub ee Nabad sugida Qaranka Soomaaliyeed.